Apache Bench - Web Server Stress Tool — MYSTERY ZILLION
Apache Bench - Web Server Stress Tool
တစ်နေ့က အလုပ်ထဲတွင် ကျွနု်ပ်တို့ ထုတ်လုပ်ထားသော Server ၏ ခံနိုင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။
Server မှာ C-ruby ၏ mongrel server ပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး၊ လိုအပ်သည့် custom middlewear software များဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထို server ကို stress test ပေးရန်ရှင်းလင်း လွယ်ကူသော stress test/ bench mark tool ကိုရှာဖွေရာ များပြားလှစွာသော GUI based tool များ၊ ပိုက်ဆံပေးရသော complex configuration လုပ်နိုင်သည့် tool များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော် သည် stress test လုပ်ရာတွင် ၄င်း tool ကို configure လုပ်ခြင်းဖြင့် အချိန် မကုန်လို။ URL တစ်ခု ခြင်းစီကို ကျွန်တော် သတ်မှတ်ထားသည့် concurrent request အရေအတွက် ပေးပို့နိုင်သည်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် လုံလောက်ပေပြီ။ အရေးကြီးဆုံးကား ပိုက်ဆံ အပို မကုန်စေလိုခြင်းပင်။
ထိုကဲ့သို့ tool ကိုရှာဖွေပြန်ရာ၊ နီးလျက်နှင့်ဝေး နေသော Apache Bench ဆိုသည့် tool ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
၄င်း tool (ab.exe) မှာ မည့်သည့် apache installation တွင်မဆို ပါဝင်လျက်သားဖြစ်နေသောကြောင့်
C:/path to apache/bin ထဲတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ab.exe ကို အသုံးချနည်းကား အလွန်လွယ်၏။ အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံသာ။
> ab.exe -n 100 -c 10 [URL]http://the_test_domain/the_test_url/[/URL]
-n option မှာ စမ်းသပ်ရန် ပို့လွှတ်သော စုစုပေါင်း request အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ပေးပြီး၊ -c မှာ တစ်ချိန်တည်းတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပို့လွှတ်သည့် စုစုပေါင်း request အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
အထက်ပါ command တွင် စုစုပေါင်း request ၁၀၀ အား တစ်ချိန်တွင် ၁၀ ခုစီ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပို့လွှတ်ရန် ရေးသားထားသည်။ ထို့ကြောင့် request ၁၀ ခုအား တစ်စုစီ၊ request ၁၀၀ အား ဆယ်စု ခွဲ၍ ပို့လွှတ်လေသည်။
ab.exe ကိုသုံး၍ GET request သာမက POST request များကိုလည်း စမ်းသပ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် TCP ၏ window size ကို စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး။ Proxy Server မှတစ်ဆင့်လည်း ဖြတ်သန်း၍ သုံးနိုင်သည်။ Browser ကဲ့သို့ cookie များကိုလည်း ဖန်တီးပေးပို့နိုင်ပြီး။ စမ်းသပ်ရရှိသည့် result များကို CSV ဖိုင်သို့လည်း တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
ab tool ၏ output တွင် အောင်မြင်စွာ ပို့လွှတ်သော request အရေအတွက်၊ အောင်မြင်စွာ response ပြန်ရသော အရေအတွက်၊ မအောင်မြင်သော request အရေအတွက်။ နှင့် server မှ တစ်စက္ကန့်လျှင် စုစုပေါင်း request မည်မျှကို
serve လုပ်နိုင်ကြောင်းကိုပါ ဖော်ပြပေးသည်။
ab tool ၏ option အားလုံးကို ab.exe -h ကို ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အောက်ပါ ပုံတွင် ab tool ကိုသုံး၍ google.com အားစမ်းသပ်သည့် output ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
အထက်ပါ output တွင် server သည် တစက္ကန့်အတွင်း ရေဘူယျ 53.28 request အရေအတွက်ကို serve
လုပ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် စမ်းသပ်ချက်မှာ စုစုပေါင်း 1.877 seconds သာကြာမြင့်လေသည်။
Non-2xx response အရေအတွက်မှာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့် response မှာ error သော်လည်းကောင်း
ဖြစ်နိုင်လေသည်။ သို့သော် Firebug ကိုသုံး၍ စမ်းသပ်ရာတွင် google ၏ response header ကိုအောက်ပါအတိုင်း
တွေ့နိုင်လေသည်။ ၄င်းတွင် http reasponse code မှာ 300 ဖြစ်ကြောင်းနှင့် content-length (Document Length in above screenshot) တို့မှာ 222 byte ဖြစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် error response မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုနိုင်သည်။
ထိုသို့စမ်းသပ်ရာတွင် batch ဖိုင်တစ်ခုကို ဖန်တီးကာ ab.exe ဆယ်ခုကို တစ်ခုလျှင် စုစုပေါင်း request ၁၀၀၀ စီ၊
concurrent request ၁၀၀ စီတို့ဖြင့်၊ ကျွနု်ပ်၏ server ကို stress load ပေးကြည့်ရာ mongrel process မှာ ၃၊ ၄ စက္ကန့် အတွင်းတွင် ကိစ္စတုံးလေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်စက္ကန့်လျှင် စုစုပေါင်း request 1000 ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပို့လွှတ်ခံရသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
ထိုသို့ heavy stress load ကိုခံနိုင်ရန် Apache အား load balancer အဖြစ်ထားကာ နောက်ကွယ်တွင် mongrel process ပေါင်း ၂၀ ခန့်အား mongrel cluster တစ်ခုဖန်တီးထားရာတွင် အထက်ပါ stress load ကိုကောင်းစွာ ခံနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရလေသည်။
ဤသည်မှာ ကျွနု်ပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ab tool အကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။ သတိပေးလိုသည်မှာ ဤ tool ကိုသုံး၍ ကြီးစွာ သော stress load ကို အခြား server များသို့ပေးပို့ကာ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး မလုပ်ကြရန်ပင်ဖြစ်သည်။ tool များတွင် ရှိသော စွမ်းပကား ကိုသုံးကာ ကောင်းကျိုးတွင် လည်းကောင်း မကောင်းကျိုးတွင် လည်းကောင်း အသုံးချနိုင်ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
ယခု ဆောင်းပါးကို ကျွန်တော်၏ blog တွင်လည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Very Nice Info. I never knows such things included in apache tools. thx